Iifonti zasimahla zoyilo olwahlukileyo kwiiprojekthi zakho | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Uninzi lwe Abathandi bokuyila kwaye iikhompyuter ziqhubeka ngokuvelisa iilogo, kodwa zinokuyifumana loo nto zininzi izinto zoyilo ezenziwe Sele bezisebenzisile zonke izixhobo abanazo, ukuvelisa oku ukuba iilogo ziqala ukubonakala zifana kwaye banokubazala abanye kuba bonke banendlela efanayo.
Ukuba unale ngxaki, ungakhathazeki, namhlanje unokufumana ezinye iifonti ezahlukeneyo Kwaye okona kulungileyo kukuba awuyi kuhlawula okanye ubuyise nantoni na, kuba ezi zisimahla kwaye zinempawu zoqobo kunye nezobuchule ezinokuthi zigqibelele kwizitayile ezintsha ofuna ukuzisebenzisa kuyilo lwakho.
1 Iindidi ezahlukeneyo zeefonti oza kuzisebenzisa
2 Ivenkile X
3 Ukunyuka kwenkwenkwezi
4 Umbhalo kaLauren
Iindidi ezahlukeneyo zeefonti oza kuzisebenzisa
Kubaluleke kakhulu ukukhumbula ukuba uyafuna yenza indibaniselwano yeefonti ezimbini kwaye enye yazo inesimbo esigqwesileyo, kuya kufuneka ujonge enye eneempawu ezahluke ngokupheleleyo kwaye engathabathi naluphi na uhlobo lokugqama kwifonti ephambili ofuna ukuyisebenzisa.
Ukuba unomdla wokufumana iindlela ezintsha, uyilo kunye nemibono Ukuze imisebenzi yakho ingayeki ukumangalisa abanye, qhubeka ufunda kwaye uyakufumanisa izimbo ezintsha ezingayi kukubiza mali kwaye onokuzifumana kwindlu yakho entofontofo.
Eyokuqala yile Ivenkile X, Olu luhlobo olukhethekileyo lochwethezo oluzele ubuntu, Inemigca ethe tse enokudideka ngaphandle kwe-serif, kodwa umahluko wenziwe ngazo zonke iinkcukacha ezinabalinganiswa bazo. Ezi nkcukacha zithatha kumgangatho otyhafisayo otyhafisayo ukuya ekuqaleni ukuba nevolumu encinci.
Lo hayi uhlobo lochwethezo olwenzelwe ukuba lusetyenziswe kakhulu, ihlala isetyenziswa ekwandisweni kokupakishwa kunye neelogo.
Uhlobo olulandelayo ngu ilungele abantu abacwangcisa ukwenza ilogo enye yokubetha kwaye yifonti enokusetyenziselwa ukugcwalisa, sithetha ngeenkwenkwezi eziKhulayo, le ifonti ifumaneka simahla.
Kwakhona phakathi kweyahlukileyo iintlobo zeefonti ezikhoyo Kuyenzeka ukuba wenze indibaniselwano entle eya kuhlala ihambelana nesitayile ofuna ukusisebenzisa.
Eyona nto ibalaseleyo yile ubunqobo ngamnye anazo kwaye oku kuyakwenza ukuba babenako ukusetyenziselwa bona ngokwabo ukufezekisa ilogo okanye isitayile esahluke ngokupheleleyo kwisicatshulwa okanye kumhlathi. Olu hlobo luluncedo kakhulu kuba ineendlela ezahlukeneyo eziza kulunga ubuntu obahlukeneyo, ukuze usebenzise uhlobo oluncinci ukufezekisa isitayile esikhethekileyo okanye ungasisebenzisa ukuba ngumhlwa okanye ukubola kwembonakalo efana neediliya.
Okokugqibela kufuneka sikhankanye umthombo Umbhalo kaLauren, le ifonti ngokukodwa eyenzelwe yokugcinaNangona kubonakala ngathi zonke izimbo ziyafana, kuya kufuneka uqaphele ukugoba kwabalinganiswa kunye nokumila komgca ngamnye wabo. Eyona nto igqame kakhulu ngale ndlela kukuba kunokwenzeka ukuba udlale umdlalo phakathi kwesiqalo kunye nesiphelo segama ngalinye ukuze kubonakale ngathi kukho ukuqhubeka phakathi kwabo.
Enye into ekufuneka iqatshelwe yiVintti, kunokuthiwa kuluhlu lonke, yile eyona nto ibonakalisiweyo yoyilo lwazo zonke iifonti. Kuthiwa ayinabhetyebhetye njengezinye, kodwa isenokuba yile ibonisiweyo kwisitayile esi siyiphuhlisayo, kuba inika intsingiselo ecacileyo kwiprojekthi kwaye akukho mfuneko yokusebenzisa izinto ezininzi ezongezelelweyo.
Njengokuba ubona zizimbo ezahlukileyo ngokupheleleyo ezingaqhelekanga kwiinkqubo ezisetyenziswa ngokwesiko, unokuzikhuphela kwaye uzijonge ukuze uzame oonobumba abohlukeneyo kwaye ungakhetha eyona ilungele isimbo sakho okanye leyo abathengi bakho bayifunayo fumana.
Unako yinike ubuncinci bokuvela kunye neendlela ezintsha ngaphandle kokuchitha imali kuyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Imithombo » Iifonti zasimahla kunye ezahlukeneyo
Lula kuyilo lwamaphepha ewebhu
UWix ungumnini wobugcisa be- $ 36 yezigidi.